Izindlela Main ukwelapha i-endometriosis
Namuhla, i-endometriosis has yokudlanga lwesithathu esiphezulu sezifo zesifazane. Ikakhulu kusukela ithinta abantu ubudala enzalo. Wathola amaphesenti angu-70 abesifazane abanemizimba ukuya kudokotela ngobuhlungu e ukhalo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba sicabangele izindlela zokwelashwa, ake uphendula lo mbuzo: "? Endometriosis - Siyini ngempela lesi sifo"
Kulesi isifo kuyinto nande kwezicubu e izibilini, okuyizinto ezifanayo Ukwakheka kanye umsebenzi lesizalo endometrium. Babonakala odongeni kwesibeletho futhi fallopian amashubhu, e wesibeletho kanye sangasese, kanye ezikhiqiza amaqanda. Okungukuthi amaseli endometrial aqale ukuzihlanganisa nomaphi lapho yinto engavamile.
Ngaphambi kwaleso sifo, udokotela, uzocelwa ukuba ibhekane ucwaningo eziyinkimbinkimbi ukuqinisekisa ukuxilongwa "i-endometriosis." Luhlolokulinganisa lwetivivinyo neluhlolo ufaka ultrasound kwesibeletho futhi ezikhiqiza amaqanda, laparoscopy / NMR. Ngenxa yokuthi lesi sifo zibe umdlavuza, futhi biopsy Kwenziwa. Ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi kuhlolwa isimiso phezu izifo zabesifazane esihlalweni endometriosis ayikwazi ukutholwa.
Ngemva izindlela zokuxilonga kwenziwe, udokotela ukukhethela ukwelashwa efaneleke kakhulu i-endometriosis. Lezi zihlanganisa yezokwelapha, kuhlinzwa, by laparoscopy, Endoscopy. Ake sibheke ngamunye kabanzi.
izindlela Medical kokuphatha endometriosis zihlanganisa ukusetshenziswa ezihlukahlukene ejenti hormone, okuyinto senzo iqondiswe ukuzinza of wesibeletho kanye endometrial foci kumiswa ngaphandle. Le mithi kukhona ukubunjwa efana control lokuzalwa amaphilisi. Inkambo yokwelashwa ngokuvamile isikhathi eside ngokwanele - kwezinyanga ezimbalwa. ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa amaphilisi ezinhlungu, ogama senzo ihlose esiqoshiwe ubuhlungu ukhalo. Naphezu ezihlukahlukene enkulu izindlela hormone, odokotela baqaphele ukuthi umphumela ukusetshenziswa le ndlela kancane.
izindlela Steel ye ekwelapheni i-endometriosis abazenzi ezimweni ezingajwayelekile. Lokhu kwenzeka uma zonke ezinye izindlela ungayeki umphumela oyifunayo. Ububi enkulu - yokuthi ukuhlinzwa kunciphisa okwengeziwe ikhono abesifazane ukuba babe nezingane.
indlela Laparoscopic yokwelashwa - esikhundleni ukuhlinzwa. Kulokhu, lo sebeziqhumbuza miniature zenziwa nge okuyinto ifakwe entweni ayisebenzisayo ekhethekile, enikeza ukwanda amaningi. Ngenxa yalesi Kutholwe ngisho emaphaketheni kulencane lendwangu. Khona-ke, ngokusebenzisa wokubhoboza laser noma electrocautery endometrium ngokweqile isusiwe. Ngo ezifweni ezimbi isitho onesifo kufanele isuswe - okungatholakali ezibhedlela eziningi zanamuhla kwenziwa ngokusebenzisa laparoscopy.
ukwelashwa endoscopic of endometriosis zikuvumela ukususa cishe bonke foci ku kwezitho zangaphakathi, futhi ngabelwa ukwelashwa kwama-hormone ngemva kokungenela kusiza ukugwema ukwehluleka kwesikhashana. Ukusebenzisa endoscope kusiza ukwenza ukwanda ezininginingi in iziguli zigaba, futhi sibonga ephezulu ukucacisa amathuluzi - ukwenza ukususwa kwabo okuphelele.
Yiqiniso, ekuqaleni lesi sifo lutholwa, aba maningi amathuba okuba ukuthi ngeke lizobuya ngemva kokwelashwa. ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa ubuchwepheshe ezintsha, ezifana cryotherapy, electrocautery, laser, ivumela ukwandisa ukuphumelela ukwelashwa.
Caesarean kwesigaba: yokutakula ngemuva kokubeletha kanye Izibikezelo okwalandela
Lesizalo adenomyosis - kuyini? lesizalo adenomyosis: ekwelapheni amakhambi abantu, ukubuyekezwa
Ukuguga ngaphambi kwesikhathi umzanyana - ungalibali ukwelashwa!
Menstruatsionny umjikelezo - kuwuphawu kweminyaka ovuthiwe ngokocansi
Toxicosis ekukhulelweni ekuseni
Ukukhiqizwa liquid e-ugwayi njengebhizinisi. Fluid for ugwayi electronic ukukhiqizwa Russian
Indlela ukwandisa ukusebenza ikhompyutha yakho
Console ekuyala CS: GO (CS: GO)
Yemfashini we brand "Adidas": ezemidlalo amasudi ngoba amadoda
Impilo - Indlela ngazana amandla lasendulo.
Foam ukhonkolo noma ukhonkolo evundile: iluphi usizo lwezinto ezibonakalayo ukukhetha ukuze kwakhiwe indlu?
Indlela lokwakha isifiso, futhi yiziphi izindlela ezikhona?
Ubani onquma puzzle ngomentshisi